Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa maanta (Axad Oct 21, 2007) warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu arrimah magaalada Laascaanood. Magaaladaas oo maanta la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhaceen. Warsaxaafadeedkii Garaadku waxa uu u qornaa sidan:
KA: GARAD JAMA GARAD ALI.
Kadib markaan eegay xaalada colaadeed ee ka jirta gobolada Sool, Sanag iyo Cayn, markaan u kuurgalay dareenka dadwaynaha iyo xiisada colaadeed ee ka aloosan deegaamadaa. Muuqashada ay muuqato in uu bilaabmo dagaal lagu riiqmo oo dhiig badani ku daato lagana yaabo inuu goboladan oo dhan ku fido.
Waxaan ku baaqayaa Qodobadan:
1. In ciidamada maamulka Somaliland ay ka baxaan gobolada SSCayn.
2. In Maamulka Puntland ay joojiyaan abaabulka dagaal si loo badbaadiyo dhiig daata.
3. In Issimada iyo waxgaradku isugu yimaadaan magaalada Buuhoodle.
4. In laqabto shir dagdaga oo dadyowga SSCayn ay aayahooda kaga tashadaan.
5. In midnimada SSCayn ay muqadas tahay.